Robot Disinfecting Robot - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
FAUCI Hawada Jeermiska Robotka Su'aalaha
Sidee buu robotkan jeermi -dilaha u shaqeeyaa?
Jawaab: Robotku wuxuu ku habboon yahay in lagu meeleeyo meel leh dhul fidsan oo fidsan iyo cabbir ku habboon. Ka dib marka la fuliyo goobihii ku habboonaa sida waafaqsan tilmaamaha hawlgalka, oo la sameeyo tallaabooyin hawlgal oo kala duwan, waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah.
Sidee buu robotkan jeermiska dilayaa u nadiifiyaa oo u nadiifiyaa?
Jawaab: Robotkani wuxuu adeegsadaa bacda jeermi -diidka dibedda si uu si firfircoon ugu sii daayo jeermiska nadiifka ah ee gaaska iyo is -daahirinta, oo inta uu meel walba ka shaqeynayo, wuxuu ku faafiyaa hawada nadiifinta gaaska iyo is -nadiifinta hawada robot -ka iyada oo loo marayo socodka dabaysha ee bacda jeermiska. Dhexgalka iyo dilka bakteeriyada ama fayraska waqti kasta oo hawada ka soo muuqan kara.
Gaar ahaan, robotkan jeermiska leh ma dili karaa COVID-19 iyo noocyada kala duwan?
Jawaab: Badeecadaha ugu badan ee la midka ah ee suuqyada ku jira ayaa ah aalado badan oo jeermis -dileyaal ah, kuwaas oo ku buufiya hawada hypochlorous acid ama chlorine dioxide xal qaab aerosol ah si ay u dilaan fayraska iyo bakteeriyada hawada. Hypochlorous acid waxay si dadban u soo saari doontaa gaaska koloriinta, iyo uruurinta maxaliga ah ee ceeryaanta kaloriin dioxide ayaa aad u sareysa, taas oo dhibaato u geysan doonta jirka aadanaha. Kiimikooyinkan ceeryaanta ah waa ka mamnuuc in la isticmaalo marka ay dadku joogaan. Sidoo kale, jeermis -dilayaashii ceeryaanta ayaa hawada lagu buufiyaa, sidaa darteed way ka fog tahay in si siman loo qaybiyo, taasoo ka dhigaysa jeermiska dhabta ah iyo hufnaanta jeermiska inay aad u hooseyso.
Maaddooyinka FAUCI AAPG ee lagu dhisay FAUCI Air Disinfecting Robot ayaa si tartiib ah u sii deynaya molecules koloriin dioxide gaas nadiif ah oo hufan iyo ion oksijiinta firfircoon ee ROS. Dhinaca kale, waxay si firfircoon u dhexgashaa oo u dishaa jeermiska si toos ah hawada, taas oo laga hortagi karo lana xakamayn karo waqtiga dhabta ah. Intaas waxaa sii dheer, xaddiga fiirsashada nabdoon ee aadka u hooseeya waxay keeni kartaa jeermi -dilid wax -ku -ool ah iyo saamayn daahirin, oo waxyeello uma geysan doonto dadka isla qolka
Hababka jeermiska jeermiska ee Robot -kan Jeermiska Hawada ma ammaan baa in la isticmaalo?
Jawaab: Heerka raad-raac ROS ee oksijiinta firfircoon ee laga soo saaray dusha alaabta lagu dhisay FAUCI AAPG ee badeecadani waxay la mid tahay walaxda ugu muhiimsan oo aan kala maarmi karin jidhka bini'aadamka oo disha fayrasyada iyo bakteeriyada. Sidoo kale waa walax dabiici ah waxayna ku jirtaa xadka raadraaca. Waa mid waxtar leh oo aan waxyeello u lahayn jidhka aadanaha;
Isla mar ahaantaana, robot-ka jeermis-dilaha ah ee ku dhex jira FAUCI AAPG ayaa ka gudbay tijaabada CMA/CNAS ee habboon: gabagabada tijaabada sunta neefsashada ee ba'an ayaa lagu muujiyey inaysan sun ahayn; gunaanadka tijaabada micronucleus -ka unuggu dhammaantood waa taban yahay, taas oo macnaheedu yahay inaysan jirin isku -beddelidda unugyada unugyada iyo sumowga hidda -socodka;
Waa maxay tijaabinta iyo shahaadooyinka uu robot -kan jeermiska dilayaa hadda leeyahay?
Jawaab: Robotyadeennu waxay dhaafeen kormeerkii ku habboonaa ee hay'adda shahaadaynta ee diiwaangashan ee shabakadda caalamiga ah ee CNAS, waxayna heshay shahaadada CE-ROHS ee EU, shahaadada FDA, shahaadada MSDS, Warbixinnada Imtixaanka Sunta Neefsashada Ba'an, Warbixinta Tijaabada Fayraska H1N1, Warbixinnada Baaritaanka Staphylococcus Albus, Aadanaha Enterovirus 71 Warbixinta Tijaabada, Warbixinta Tijaabada Escherichia Coli.
Waa maxay taxaddarrada isticmaalka robot -ka jeermiska dila?
The Marka robotka la dhigto, waa inay ka fogeysaa wax ka badan 1 mitir waxyaabaha birta ah iyo dharka;
Haddii robotka jeermiska dilayaa uu si joogto ah uga shaqeynayo gudaha, ma loo baahan yahay maaskaro?